Waddani by Abdulatif Salat - issuu
WAdDANI sabti, 28 JANUARY - jimce, 10 FEBRUARY 2012
ARAGTI & AARAA
Qof kasta oo Soomaali ah oo xil loo dhiibo wuxuu doonayaa inuu ku takrifalo maamulka loo dhiibay.
warar kooban LACAG BEEN ABUUR AH
WARARKA GEESKA AFRIKA
CiidaMmada Ammaanka Burco oo qabtay lacag been abuur ah
Maydadka Tahriibayaal Soomaaliyeed oo laga helay xeeb ku taalla dalka Liibiya
Firqadii uu hoggaaminayey Berjawi ayaa waayadan dambe ka soo hor jeestay hoggaanka Godane.
La soo xiriir Waddani
Email: waddani@wadanmedia.com Tel No. 020 2686910 www.wadanmedia.com
xafiiska un-ka ee muqdisho
Haddii qofi isku dayo inuu diido, waxaa garaacaya, xiraya oo u hanjabaya Ciidammada Mileteriga ee Itoobiya.â&#x20AC;?
wararka gobalka oo kooban
Marka si saaâ&#x20AC;&#x2122;id ah loo isticmaalo ayaa geedku wiiqmayaa, oo innaga ka adkaysan kari maayo cayayaanka dhirtaas ku nool.
Ekatirina Trendafilova, madaxa garsoorayaasha dacwadda Kenya.
Innagu xukun ku ridi mayno qof eedaysane ah ama shakhsi aan eed-galin,”
MAQAAL warar kooban SOO DHAWEYN
DKMG Oo Taageertay Badbaadinta Shaqaalihii ajaanibta
Qorshe iskuulaad looga dhisayo Muqdisho oo la soo dhoweeyay
Nauval, Hoggamiyaha shirkadda caanaha hooyooyinka ka soo qaadda
Waxaan jecelahay inaan ku caawiyo qaranka Indonesia inay dhisaan jiil caafimaad-qaba.â&#x20AC;?
Madaxweyne Shariif oo Muqdisho kula kulmay Rawlings
Adeegga caanaha hooyada ayaa shirkaddan uu abuuray Mr Nauval waxay ku qaadanaysaa ilaa iyo hal saac in ilmaha reer Jakarta lagu gaarsiiyo caanaha hooyada shaqaysa.
ilmaha la iska soo tuuro
Dumarka badankood way dhimanayaan waayo waxay laasinteen inay ilmaha isaga bixiyaan ama tuuraan qaab waliba oo ay heli karaan sababtaas ayaa keenaysa in xaalka loo arko inuu heer xun gaaray.â&#x20AC;?
Haweenay kalena markii ay ilmaha iska soo tuurtay, ayaa waxaa gudaheeda looga tegay qaybo ka mid ah jidhkii ilmaha.
WARARKA DUNIDA warar kooban MAMNUUC
Xiddig filimada samaysa oo reer Iiraan ah ayaa laga mamnuucay Iiraan Xiddig filimada jisha oo reer iiraan ah ayaa loo sheegay inaan lagu soo dhowayn doonin dalkeeda kaddib markii jariidad ka soo baxda dalka Faransiiska ay ku soo baxday iyada oo qaawan, waxaanay sheegtay inay taas u samaysay ashtako ay dawladda kaga cabanayso jujuubka lagu hayo haweenka reer Iiraan. Sawirkan (iyadoo qaawan laga qaaday) GolshiFteh Farahani ayaa waxaa daabacay jariidadda “Madame Le Figaro Magazine.” Waxaana sawirku soo jIItay dad aad u badan, iyagoo soo booqday boggeeda Facebuugga, waxaanay ka kala imanayeen daawadayaasha reer Iiraan iyo Bariga Dhexe. Xidigtan reer Baaris waxay ka timid dalkeeda Iiraan sannadkii la soo dhaafay iyadoo ka ashtakoonaysa xeerarka iyo qawaaniinta adadag ee diinta Islaamka ee ay raacayaan maamulayaasha wakaaladda filimada ee dalka Iiraan taasoo lagu dhaqayo xeerarka adadag ee uu soo saaray Madaxweynaha dalka Iiraan Mahmoud Ahmadinejad. Gabadha oo xanibaadda lagu soo rogay ka hadlaysa ayaa waxay tiri: “Waxaa warka ku saabsan amarka layga mamnuucay inaan dalka galo ii soo gudbiyey Wasiirka Dhaqanka iyo Tarbiyada Islaamka, wuxuuna ii sheegay inaanay Iiraan u baahnayn Xiddig iyo Xidig toona, oo wuxuu igu yiri (bay tiri) filimadaadana meel kale la raadso.”
Rag loo xirxiray markii ay garaaceen gabdho reer Malaawi ah oo surweel gashan Niman warata ah oo jooga suuqa weyn ee caasimadda Malaawi ee Blantyre ayaa la qabqabtay kaddib markii ay garaaceen oo weliba ay ku qaawiyeen suuqa dhowr dumar ah oo surweello isku soo giijiyey iyagoo ku eedaynaya inay dhaqankii reer Afrika ka tageen. Haddaba xariggoodan ayaa waxaa uu soo baxay kaddib markii madaxweynaha dalka Malaawi Mr Bingu Wa Mutharika amray in ciidammada biliisku ay soo qabqabtaan cid waliba oo hablaha saraawiisha xiran ee jooga meelaha maxfalka ah soo weerarta. Ilaa iyo 1994tii, ayaa waxaa hablaha reer Malaawi ka xaaraantimeeyey inay saraawiil soo xirtaan Madaxweynihii hore ee dalka Malaawi Hasting Kamuzu Banda. Waxaa kaloo uu ka hor istaagay inay xirtaan goonnooyinka loo yaqaanno “Mini Skirts” oo keenaya in bawdyaha hablaha la arkayo. Raggana waxaa laga mamnuucay inay timaha sii daystaan. Madaxeyne Bingu Wa Mutharika oo idaacadaha kala hadlaya dadka reer Malaawi ayaa waxaa uu yiri: “Ma aqbali karo in qofi inta dariiqyada yimaado haweenka iyo gabdhaha saraawiisha wata qaawiyo, waayo taasi waa sharcidarro. Dadkuna xor bay u yihiin inay xirtaan wixii ay doonayaan. Dumnarka doonaya inay saraawiil gashadaanna way gashan karaan, dalka ayaana idinka difaacaya, tuugta, waratada iyo argaggixisadaba.”
David Cameron, Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska.
Mabda’a sare u qaadista lacagaha IMF waxaa ku jirta danteenna, laakiinse urUurinta dakhliga dheeriga ah ma caawinayo dalalka isticmaala lacagta Euro-da
Aayad Qur’aan ah
Miyaadan ku qancayn haddii aan kheyrkayga siiyo kan aqribka xiriiriya, oo aan kheyrkayga ka xiro, kan qaraabagoyska ah?”
Haddaba waa arrin laysku raacay in salaadda Jimcaha goor hore loo soo diyaar garoobo.
BULSHADA ila qosol
Marka la diyaarinayo maraqa, waxaa la isticmaali jiray, khudrado, iyo dhir kala duwan.
Maaddaama ay tahay inaad ciil baxdo, waxaad feer ka badinaysaa barkimaha sariirta si aad ku nafisto..
Ancelotti weli wuu rabaa Lampard
Read the latest issue of Waddani